माधव नेपालले अस्वीकार गरे ओलीको प्रस्ताव, प्रचण्डसँग गठबन्धन गरेर सबक सिकाए, यसरी हार्यो बालुवाटार !Nepalpana - Nepal's Digital Online
माधव नेपालले अस्वीकार गरे ओलीको प्रस्ताव, प्रचण्डसँग गठबन्धन गरेर सबक सिकाए, यसरी हार्यो बालुवाटार !
काठमाडौं । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषदको एकलौटी पुनर्गठन र कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च जनता आफैले व्यहोर्नुपर्ने निर्णयले नेकपामा विवाद बढाएको छ । नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रुष्ट छन् ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर फकाउने प्रयास गरे । प्रचण्डको आलोचना गर्दै आफूसँग मिल्न अनुरोध पनि गरे । तर बारम्बार धोका दिने ओलीको शैलीसँग राम्रोसँग परिचित नेता नेपालले प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उल्टै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग गठबन्धन बलियो बनाएर ओलीलाई सबक सिकाए ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा ओलीले कर्णाली प्रदेशमा ठूलो धक्का खाए । मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैमाथि प्रत्युत्पादक सावित भयो । अर्थात कर्णालीमा ओली समूहको हार भयो । भएको प्रदेश प्रमुख सचेतकको पद गुमायो । ओली समूहका गुलाबजंग शाह प्रमुख सचेतक थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री शाहीले हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए । यसरी हेर्दा कर्णालीमा प्रचण्ड–नेपाल समीकरण बलियो बनेको छ । माधव नेपाललाई फकाउने ओलीको प्रयास विफल भएको छ । साथसाथै अविश्वासको प्रस्ताव पनि असफल । यसरी बालुवाटार हारेको छ ।
अब प्रचण्ड र नेपाल केन्द्रमा पनि ओलीविरुद्ध एक्सन लिने तयारीमा छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँ भन्दैमा सीमा नाघेको दुवै नेताको निष्कर्ष छ ।
कार्तिक ६, २०७७ बिहिवार १०:४५:३८ बजे : प्रकाशित
गिरिजापछि नेपालको राजनीति ओलीकै वरिपरी यसरी दशकौ घुम्दैछ, गृहमन्त्रीले गरे खुलासा
नारायणकाजीलाई सूर्य थापाको दनक : 'निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो खल्तीको ठान्ने? केके गर्नुपर्ने हो लेखेर देउ न त'
प्रचण्ड र देउवाको नाक काटिने गरी गोकुल बाँस्कोटाले दिए दनक !